क्यापक्र्रिडले के गर्छ? वित्तीय लिङ्कमा परिभाषा
सुरु ऋण wiki Capkredit
क्याप ऋण के हो?
लामो अवधिको ऋण पूरा गर्नाले सँधै ग्राहकलाई वर्तमान ऋणको लागि निश्चित ब्याज दर बन्छ। यहां सम्म कि बंधक उधार संग, निश्चित निश्चित ब्याज अवधि को गारंटी हो। यदि यो समयावधिको समयावधि सकियो भने, तथापि, यो ग्राहक हो र बैंकले ब्याज सर्तहरूमा पुनरागमन गर्न वा पछि वित्त पोषण गर्ने छ। यहाँ आउछ Capkredit खेलमा। जर्मनीमा बैंक ग्राहकहरू बीचको यो अज्ञात छ। तर उहाँ रोचक हुन सक्नुहुन्छ। ऋण भनेको ब्याज दर भिन्न गणना गरिएको हो।
शब्द अङ्ग्रेजी भाषाबाट आउँदछ र अर्थहरू क्रेडिटको रूपमा लिन्छ। यो माथिल्लो सीमाको तुलनामा हुन सक्छ। त्यो हो, यो ऋण मा रुचि केवल एक निश्चित अधिकतम मूल्य वृद्धि हुनेछ। क्रेडिट मुख्यतया दुई विशेषताहरु द्वारा विशेषता गरिएको छ। ऋणसँग लामो परिपक्वता छ, तर केवल ब्याजको एक सानो बांड छ र टोपी छ, त्यसैले ब्याजको लागि माथिल्लो सीमा।
यस ऋणको लागि उच्च सीमा वा तल्लो सीमाको विकल्प
यस ऋणको पहिलो छाप उधारकर्ताको लागि एक हानि हुन सक्छ। तर यो आवश्यक छैन, किनभने धेरै वर्षहरूमा किन्डिङ लोन ब्याजमा उधारकर्ताको लागि वास्तविक लाभ हुन सक्छ। विशेष गरी आर्थिक संकटले यो देखाउँछ। यो बाहिर जान्छ कि त्यहाँ ब्याज दर विकासको लागि मात्र होईन र न केवल हुनेछ। धेरै व्यक्तिहरू जसले पहिले नै सामान्य ऋण पूरा गरेको छ त्यस्ता टोप क्रेडिटको लागि चाहिएको थियो। वास्तवमा, प्रभावी ब्याज दर, विशेष गरी निर्माण ऋण को लागी, हालको साताहरुमा बज्नु भएको छ र हाल धेरै नै स्तर मा छ। यो विशेष गरी ऋणात्मक व्यक्ति हो जसले उच्च ब्याज दरसँग बिरुद्ध बुझिएको ऋणमा बाँधिएको छ।
यो ऋण विशेष गरी मानिसहरू को लागी लामो अवधिको लागि ऋण बनाउन जाँदै हुनुहुन्छ तर अझै पनि कम ब्याज दरबाट लाभ उठाउन चाहन्छ। यद्यपि, यो ऋणको माथिल्लो सीमा शुल्क नि: शुल्क छैन। अधिकतर अवस्थामा, ब्याज दर घट्छ, तर यो सैद्धांतिक हुन सक्छ कि ब्याज दर माथिल्लो सीमा सम्म पुग्छ। निस्सन्देह यो ग्राहकको लागि खतरा प्रतिनिधित्व गर्दछ।
टोपी ऋणको फाइदाहरू
ऋण को एक लाभ यो ग्राहकहरु संग बंधक ऋण को रूप मा धेरै लोकप्रिय छ। ग्राहकहरूसँग उद्देश्य उद्देश्यको सेवा गर्ने अवसर छ, किनभने ब्याज दरमा परिवर्तनहरूको एक तिमाही आचरण निश्चित छ। बैंक हरेक छ महिनामा प्रमाणिकरण आफैमा गर्न सक्दछ। प्रारम्भमा सेट गरिएको ब्याज दरले यहाँ निम्न सीमाको रूपमा सेवा गर्न सक्छ। यद्यपि, यो गिरावट जारी राख्न सक्छ। यो क्रेडिट संस्थाको रुचिमा छ। यहाँ क्रेडिटको माथिल्लो सीमा ग्राहकहरूको लागि बढी फाइदा हो। यसले निर्धारित गर्दछ कि कर्जाको कत्तिको उच्च हुनेछ र हुन सक्छ। साथै सांप्रदायिक ऋणको क्षेत्रमा, यस्तो ऋण लोकप्रिय छ।
क्यापक्रडिटको अर्को फाईल निजी ग्राहकहरु र व्यवसायिक ग्राहकहरुको लागि अवस्थित छ। यो ऋण विशेष गरी फायदेमंद हुन्छ जब यो सुरक्षा योजना बनाउँछ। यहाँ उसले राम्रोसँग सन्तुष्ट गर्न सक्छ। व्यापारिक र निजी उधारकर्ताहरूले दुवैसँग राम्रो गणना गर्न र सुरक्षित रूपमा प्रत्येक महिना तिर्न को लागी दरको मौका छ। यदि ब्याज दर बढ्न सक्दैन र यहाँ सम्म कि घटाइन्छ, त्यसपछि उधारकर्ताको लागी पुन: भुक्तानी किस्त र भुक्तानी किस्तहरू कम छन्।
उधारकर्ताको लागि पनि अन्य लाभहरू छन्। उदाहरणका लागि, बैंकहरूले प्रायः पूर्वभुगतानको दण्डमा ऋणको प्रारम्भिक पुनर्जन्मलाई अग्रता दिन्छन्। साथै, ग्राहकहरूले निश्चित मितिमा विशेष भुक्तान गर्न मौका पाएका छन्। एक पूर्ण भुक्तानी पनि कल्पना योग्य छ। विभिन्न बैंकों को लागी यो ऋण पनि एक निश्चित दर ऋण मा रूपान्तरण गर्न सम्भव छ।
अर्को लेखग्यारेन्टी शुल्क